Tungsten Boride Powder, WB2 - Goodao Technology Co, Ltd.
BW2 ine yakanyanya kusungunuka poindi, kukwirira kuomarara, kukwirira kuitisa uye kukwirira kwenyonganiso nemishonga uye oxidation kuramba kumarudzi akasiyana enhau. Izvi zvakanakisa zvivakwa zvinogadzira WB makomputa Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakaomarara .Kukuya kupfeka uye semiconductor firimu, yakanyanya tembiricha ngura electrode zvinhu, kukanda chakuvhuvhu, chinokukurwa uye zvichingodaro
Molecular fomula WB2
CAS Nhamba 12228-69-2
Nzvimbo yakanyunguduka 2900 ℃
Kushanda nekuda kwekuomarara kwayo kwakawanda inogona kushandiswa senge tembiricha yepamusoro uye hasha
Tungsten boride ine yakanyanya kusungunuka poindi, kukwirira kuomarara, makemikari kugadzikana uye zvimwe zvakakwana zvinhu Haisi chete nyowani yepamusoro yezvinhu, asi zvakare ine yakasimba kuomarara. Icho chinhu chakakosha kudzivirira bara muchiuto. Tungsten boride ine yakawanda chikamu zvikamu, uye chimiro chematanho akasiyana chinoshandukawo. Kwemakore anodarika makumi mashanu, iyo tungsten yepamusoro boride yakafungidzirwa kuve WB4, iyo ine matatu-mativi gridhi e boron maatomu. Iyo thermodynamic kugadzikana uye mechimiro zvivakwa zveanogona masisitimu ezvikamu zveiyo tungsten carbide system zvakarongedzwa zvakaringana nekubatanidza yekutanga chirevo kuverenga uye iyo thermodynamic kugadzikana:
Nekuda kweiyo yakaderera yemahara diffusion coefficient yeWB2, parizvino, iyo synthesis ye dense tungsten diboride inonyanya kuwanikwa kuburikidza nekutsvukisa pasi pekupisa kwakanyanya uye kumanikidza. Kune rimwe divi, nekuti B inopwa nekupisa kwakanyanya. Naizvozvo, iko kugadzirira kwakananga kweWB2 block zvinhu zvine tungsten poda uye boron poda kunonetsa kudzora boron zvirimo, uye yakaderera borides (senge W2B) inogona kugadzirwa mune yekutsvedza maitiro, kuitira kuti dense block zvinhu neWB2 sechikamu chikuru haigone kuwanikwa zvizere.
Kupfeka - kusagadzikana kupfeka uye semiconductor firimu yezvipfeko - zvinodzivirira zvikamu.
Pashure: Tantalum Boride Upfu, TaB2
Zvadaro: Vanadium Boride Powder, VB2